P.Ti December 18, 2009 at 6:01 PM
မှတ်ချက်ရေးရမှာတောင် ပျင်းတယ်... အဲလောက်တောင် ပျင်းနေတယ် အမရေ..:D
ThuHninSee December 18, 2009 at 6:15 PM
မပျင်းပါဘူး...ဒီနေ့မှ လွတ်လပ်ရေး သေချာရတာ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မပျင်းဘူး...မပျင်း..မပျင်း..မပျင်း။
အပေါ်ကမှတ်ချက်ရှင်ကလဲ နေရာတိုင်းမှာ သူချည်းပဲ။ တွေ့တွေ့နိုင်လွန်း။
ဝေလင်း December 18, 2009 at 8:10 PM
မအယ် တို့ ငယ်ငယ်က little Arthur wants to play နေရာမှာ fatty.... wannts to play လို့ မအယ် နာမည် ထဲ့ ဆိုခဲ့ကြတယ်။
မိုးအေးရင် မပျင်းဘူး။ အရမ်းပျော်တယ်။ မိုးကြီးလည်း ပျော်တယ်။ စွေနေလည်း ပျော်တယ်။ အလိုလို ပျော်တာ။ မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တယ်။
အပြုံးပန်း December 18, 2009 at 9:30 PM
ပျင်းဘူး၊ မပျင်းပါဘူး လို့
Kay December 19, 2009 at 12:27 AM
ဒီပုံအတိုင်းဆို...ဘဘလီ တို့.. လေးလေးလီ တို့ နိုင်ငံကြီးတော့..ကုန်ထုပ်အားတွေ ကျပြီး.. လေထု ညစ်ညမ်းမူတွေပဲ များကုန်တော့မယ်...( ကားတွေ စီးကြလို့ ပြောတာပါ..)း))
ကြည် December 19, 2009 at 12:40 AM
ပျင်းစရာကောင်းတာကို ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
Hmoo December 19, 2009 at 1:14 AM
Craton December 19, 2009 at 1:56 AM
“စိတ်ပါလျှင် ပိုပိုပြီး ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ချက်တတ်ပါသည်”
တစ်လုံးချင်း သေချာဖတ်သွားပါသည်။ ခွိ.. မျက်လုံးလှုပ်ပေတော့ဗျို့။
T T Sweet December 19, 2009 at 4:55 AM
ကိုယ်ရေးရမှာပျင်းလို့ မရေးပဲထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို သူငယ်ချင်းမှ ရေးလာတော့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Holiday ကလဲ နီးလာတော့ Holiday mood လေးကလဲ အလုပ်သွားရမှာ ပျင်းတာကို တွန်းအားဖြစ်စေပါသည်။
Moe Cho Thinn December 19, 2009 at 10:09 AM
ပျင်းပျင်းနဲ့ ဘလော့ လိုက်ဖတ်နေတာ ကိုယ့်ထက်ပျင်းတဲ့သူတွေ တွေ့လို့ မျက်လုံးကျယ်သွားတယ်။ :))
Anonymous December 19, 2009 at 11:51 AM
သင်းနွယ်ဇင် December 19, 2009 at 1:16 PM
ပျင်းလို့ လာဖတ်တာ ပျင်းသောနေ့တွေ့လို ပျော်သွာတယ်။း)
Thant December 19, 2009 at 1:30 PM
Rita December 19, 2009 at 3:07 PM
(သေချာတာတခုကတော့ ကိုယ် စိတ်မဝင်စားပဲ ပျင်းရိသော အရာများအတွက် အချိန်တွေ ကုန်နိုင်ခဲသလောက် ကိုယ် စိတ်ပါဝင်စားပြီး ပျော်မွေ့သော အရာများအတွက်မူကား အချိန်တို့သည် အလွန်တရာမှ ကုန်ဆုံးလွယ်သည်ပဲ…။)
Relativity Theory ဆိုတာ ဒါလား??
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 20, 2009 at 6:44 AM
khin oo may December 20, 2009 at 2:00 PM
ပထမဆုံးတက်လာတဲ့နေ့က့ ပျင်းလို့လာမဖတ်ဘူး. နောက်နေ့လာဖတ်တယ။်
ပျင်းလို့ မမန့်ဘူးရယ။် ဒီနေ့မှ လာရေးဖြစ်တယ။် ဟူး....................
blueskyforest December 21, 2009 at 9:07 PM
ပျင်းတဲ့နေ့အကြောင်းဖတ်ရမှာ ပျင်းလို့ နောက်မှပဲဖတ်မယ်နော်။
ပန်းခရမ်းပြာ December 22, 2009 at 12:34 PM
မသက်ဝေ အသစ်တင်တိုင်း မပျင်းမရိဘဲ အမြဲလာဖတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင် ပို့စ် အသစ်ရေးဘို့ ကျတော့ ပျင်းနေမိပြန်ရော။
ပုံရိပ် December 26, 2009 at 8:30 AM
ထောက်ခံပါသည်။ ပျင်းပျင်းနဲ့ လုပ်စရာရှိသည်များကို လုပ်နေရပါသည်။ ဘ၀ကြီးကိုလည်း တခါတရံ ပျင်းမိပါသည်။